ညမင်းသား: LSCS and Normal labor ဗိုက်ခွဲမွေးတာ နဲ့ ရိုးရိုးမွေးတာ
သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ရန်ကုန်မှာ ဆိုတော့ ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေက ပြောတာလဲ ရမ်းမယုံရဲပါဘူး။ ခွဲမွေးပြီးရင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ မိခင်ရော ကလေးပါ ပြဿနာ မရှိရင် ရိုးရိုးမွေးတာ ပိုကောင်းနိုင်ပါသလား။ ရိုးရိုးမွေးတဲ့အခါ Painless လဲ မွေးလို့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါကကော ဘယ်လို အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ ရှိပါသလဲ။
အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ “ဆန်းတာတိုင်းက ရိုးတာထက် နေရာတကာမှာ မသာပါ။” ကလေး-မီးဖွါးတာမှာ Normal labor ဆိုတဲ့ Vaginal canal မွေးလမ်းကြောင်းကနေ ဖွါးတာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကနေ ဘာမှ အကူအညီ မပါဘဲ၊ ဓမ္မတာ-ထုံးစံအတိုင်း မွေးနိုင်တာက (ပါဖက်) ဖြစ်တယ်။ Painless childbirth ကို တပုဒ်သပ်သပ် ရေးပါရစေ။
မွေးလမ်းကြောင်းကနေ မွေးရာမှာ တခါတလေ ကူရတာတွေ ရှိတယ်။ သားဦးမွေးရင် မွေးလမ်းကို Episiotomy ချဲ့ပေး-ပြန်ချုပ်ပေးရတာ၊ သားအိမ်ညှစ်အား နည်းနေရင် Oxytocin (Syntocinon) ဆေးကို Drip ထဲထည့် သွင်းပေးရတာ၊ မညှစ်နိုင်လို့ ဒါမှမဟုတ် ကလေးခေါင်းထွက်တာ ကြာမနေစေချင်လို့ Forceps delivery ညှပ်ဆွဲ၊ Vacuum extraction လေစုပ်စက်နဲ့ ဆွဲကူ မွေးပေးရတာ၊ Artificial rupture of membranes ရေမြွှာကို စောဖေါက်ပေးတာတွေ ဖြစ်တယ်။
1. “ဘာလို့ ခွဲမွေးရသလဲ။” နောက်ကိုယ်ဝန် လာအပ်တော့ အရင်ကလေး ဘာလို့ခွဲမွေးရသလဲ မေးရင် ကောင်းကောင်း မဖြေတတ်ကြပါ။
2. “မခွဲရင် မရဘူးလား။” လူနာရှင်က ဆရာဝန် မမေးရဲကြတာ များတယ်။
3. “တကယ်ကို မရဘူးလား” ဆိုတာတွေ သိရလိမ့်မယ်။ ပြောခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအတော်များများမှာ လူနာ-အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ မရကြပါ။ အုပ်ချုပ်သူတွေက ပြန်မေးတာ မကြိုက်သလို ဆေးရုံတွေကလဲ မကြိုက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
တချို့က နေ့ကောင်း-ရက်သာရွေး မွေးချင်သူတွေလည်း ရှိတယ်။ လူနာကလဲ “မခံနိုင်တော့ဘူးဆရာ ခွဲပေးပါတော့” ပြောလာသူလည်း မရှားပါ။ ဆရာဝန်က စိတ်မရှည်၊ Risk ကို နဲနဲလေးမှ မယူချင်လို့ ခွဲတာလည်း ရှိပါမယ်။ ဒီလို ဆရာဝန်မျိုးကို အပြစ်မတင်နိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ-ဆေးခန်းတွေကတော့ ခွဲပေးရင် လူနာဆီက ငွေပိုယူလို့ရတာမို့၊ အချိန်မစောင့်ဘဲ ခွဲတာလည်း တကယ် ရှိပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကစနစ် ကောင်းဘို့ ပွင့်လင်းမှု လိုတယ်။ လူတွေကနေ လူတွေကို ထိန်းနှိုင်တဲ့စနစ် ရှိရမယ်။ အုပ်ချုပ်သူကသာ ထိန်းတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေစိုးမိုးမှု အစစ် ရှိရမယ်။
ခွဲမွေးရတာမှာ တခြား ရွေးစရာလမ်း မရှိတာမို့ ခွဲမွေးတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။ မခွဲမဖြစ် နံပါတ်တစ်ကတော့ Cephalo-pelvic disproportion (CPD) ကလေးခေါင်းနဲ့ မိခင်မွေးလမ်း မတန်တဆ ဖြစ်တာ။ ဒါမှာလည်း (၂) မျိုး။ မအေရဲ့ အရိုးကွင်းက ကျဉ်းနေတာနဲ့ ကလေးက ပုံမှန်ထက် ခေါင်းကကြီးနေတာ။ ဒီအခြေအနေ နှစ်ရပ်လုံးက ခွဲကိုခွဲရပါမယ်။
6. မိခင်မှာ HIV positive ဖြစ်နေတာ၊
7. Umbilical cord prolapse ချက်ကြိုးကြွံကျနေလို့၊
ဗိုက်ခွဲရက် ၂ မျိုး
(LSCS) ဗိုက်ခွဲခြင်းရဲ့ အားကောင်းချက်တွေ = သွေးထွက်နည်းမယ်၊ ဗိုက်ထဲမှာ တွယ်ကပ်မှု နည်းတယ်၊ သားအိမ် ကြွက်သားကို သူ့အကြောအတိုင်းသာ ခွဲလို့ အထိနာ သက်သာတယ်၊ ပိုးဝင်ဘို့ အခွင့်နည်းတယ်၊ ခွဲပြီး ဗိုက်ကယ်တာ အဖြစ်နည်းတယ်၊ အဖိတ်အစင် နည်းတယ်၊ နောက်ကိုယ်ဝန်မှာ အချင်းက အထဲချုပ်ရိုးနေရာ လာမကပ်နိုင်ဘူး၊ သားအိမ်ကို လက်နဲ့ ကိုင်တွယ်ရတာ နည်းတယ်၊ ချုပ်ရိုး ပိုပြီး ခိုင်မာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်မှာ HIV ပိုးရှိနေရင် ကလးကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ၇ ပုံ ၁ ပုံရှိလို့ ဗိုက်ခွဲမွေးပေးရင် ကူးနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း နည်းစေတယ်။ ရက်၊ အချိန်၊ ရွေးမွေးနိုင်တယ်။ တတိယကလေး ခွဲရရင် တခါတည်း သားကြော ဖြတ်ပေးနိုင်တယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းဟာ ကလေးဖွါးတဲ့ဒဏ် မရှိ ဖြစ်နေပါမယ်။
(LSCS) ဗိုက်ခွဲခြင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေ = အနာလေးတခု ခွဲရတာဖြစ်ဖြစ် ခွဲမွေးတာဖြစ်ဖြစ် အနည်းနဲ့အများ သတိထား ရတာတွေ ချည်းပါဘဲ။ ခွဲစိတ်ခြင်း အန္တရာယ်တွေက ခွဲစိတ်မှုက ကြီးကြီးသလို၊ လုပ်တာကိုင်တာ ပေါ့ဆရင် ပေါ့ဆသလို ရှိနိုင်တယ်။ မေ့ဆေး-ထုံဆေး မှန်သမျှလဲ သတိထားစရာတွေ ရှိပါမယ်။ ဆီးအိမ် နဲ့ ဆီးဆင်းပြွန်ကို ထိခိုက်နိုင်တယ်၊ အထဲခွဲကြောင်း ချဲ့ရရင် သွေးထွက် များမယ်၊ အချိန် လုရတယ်၊ ပိုခက်တယ်၊ ကလေးက သိပ်ကြီးနေရင် ခက်မယ်။